नेपालमा न कोहीँ भोको रहन्छ त न कोहीँ भोकले नै मर्छ , दुईतिहाईले सबैको रक्षा गर्छौं:ओली,,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेपालमा न कोहीँ भोको रहन्छ त न कोहीँ भोकले नै मर्छ , दुईतिहाईले सबैको रक्षा गर्छौं:ओली,,हेर्नुहोस!
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा कोही भोको नपर्ने र कोही भोकले नमर्ने बताएका छन्। बि’हीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बो’ल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
‘यो जनताको स’रकार हो। त्यस_कारण कोही भोकै पर्दैन र कोही भोकले मर्देन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘खाना र आवासबिना नेपाली अलपत्र परेर त्यसरी बस्नु पर्दैन। यी दुई वर्षमा कम्तिमा हामीले यी प्र’बन्ध गरेका छौँ।’
ओलीले २१ शताब्दीमा कसैका छोराछोरी कुकुरसँग सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्थाको अ’न्त्य भएको प्र’ष्ट पारे। उनले यो सरकार सडक बालबालिकाको समेत भएको बताए। उनले आफूले प्र’धानमन्त्री बने ल’गत्तै यो कुरा बताएको प्रष्ट पारे।
‘२१ औं सताब्दीका मान्छेका छोराछोरीहरु कुकुरसँगै सडकमा बेहालसँग व्यवहारिसे अभिभावकबिहीन भएर भोकै सुतेको लम्पसार परेको त’पाईं हामीले देख्थ्यौँ। तर, आज ति बालबालिका देख्नु भएको छ ?’, प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यस्ता बालबालिकाको पनि सरकार हो भनेर मैले प्र’धानमन्त्री हुने बित्तिकै भनेको थिएँ। सँगै ओलीले नेपाल अब भिखारी मुक्त भएको बताए।
‘नेपाली समाजलाई भि’खारीमुक्त बनाउने अभियान सफल भएको छ। नेपाल एउटा सडक बालबालिका नभएको देश हो। भिखारी मुक्त देश हो’, उनले भने, ‘नेपालमा बाच्नका लागि कसैले हात थापेर भि’ख माग्नु पर्दैन। कुनै महिलाले एउटा बच्चा बोकेर भि’ख माग्नु पर्दैन।’
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उप’चारविधि र प्रतिरोधी क्षमता राम्रो भएकै कारण नेपालमा कोरोनाबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या कम रहेको ओलीको भनाइ छ।
ओलीले तथ्यांकमा २० जनाको मृत्यु भएको देखिए पनि अधिकांश कोरोनाका कारण नमरेको दाबी गरे। उनले डब्ल्यूएचओको मान्यताका कारण मृ’त्युपछि संक्रमण पुष्टि भएकालाई कोरोनाकै कारण मृ’त्यु भएको भन्नु परेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले मृ’त्यु संख्या अ’न्य देशको भन्दा नेपालको कम भएको समेत दा’बी गरे। यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।
Previous भारत सरकारको बे’बकुफीले नेपाल टा’ढियो दु’खित छौं : भारतीय पुर्वमन्त्री,,हेर्नुहोस!
Next धर्तीका कुनैपनि शक्तिले MCC पास गर्न स’क्दैनन् : झलनाथ खनाल (भिडिओ सहित),,हेर्नुहोस!